Ficus Microcarpa, Banyan Tree Bonsai, Pachira Macrocarpa - Anwụ na-acha
Olee otu anyị si bido
Gbasara ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Nkọwa: ● Aha: FICUS RETUSA / TAIWAN FICUS / GOLDEN GATE FICUS ● Size: ogologo ite 15cm ● Ọkara: cocopeat + peatmoss ● ite: seramiiki ite / plastic ite ● Nọọsụ Okpomọkụ: 12 Celsius C ● Jiri: Zuru oke maka ụlọ ma ọ bụ ọfịs Nkọwa: box Igbe ụfụfụ, ahịhịa osisi, nkata plastik ● ígwè ikpe Nlekọta anya: Ficus microcarpa nwere mmasị na gburugburu anwụ na-acha nke ọma, yabụ mgbe ị na-ahọrọ ala ọkpụite, ị ga-ahọrọ ala mmiri na-eku ume ma na-eku ume. Oké mmiri ga mfe c ...
Lotus achara kechioma achara osisi dracaena sander ...
Nkọwapụta: Aha aha Lotus Bamboo Nkọwapụta 30 cm-40cm-50cm-60cm Ihe njirimara Evergreen, uto ngwa ngwa, dị mfe ịtụgharị, na-anabata ogo ọkụ dị ala yana enweghị mmiri ọhụụ. Toro Season niile n'afọ gburugburu Function Air fresher; Ime ụlọ mma Habit Na-ahọrọ ihu igwe ọkụ ma na iru mmiri Okpomoku 23-28 Celsius C dị mma maka ọ bụ ibu Nkwakọ ngwaahịa na nzipu: Mbukota Ime Mbukota: mgbọrọgwụ juru na mmiri jelii na akpa rọba, oute ...
Nkọwapụta: Size: 5.5cm, 8.5cm, 10.5cm Nkwakọ ngwaahịa & nzipu: Nkwakọ ngwaahịa nkọwa: ụfụfụ igbe / katọn / osisi ikpe Port of Loading: Xiamen, China Means of Transport: Site ikuku / site n'oké osimiri Lead oge: 20 ụbọchị mgbe na-anata ego Mentkwụ :gwọ: Paykwụ mentgwọ: T / T 30% n'ọdịnihu, itule megide akwụkwọ nke mbupu akwụkwọ. Omume Uto ： Gymnocalycium mihanovicii bụ genus nke Cactaceae, nke si na Brazil, oge uto ya bụ oge ọkọchị. Okpomọkụ kwesịrị ekwesị dị 20 ~ 25 ℃. Ọ na-amasị ya na-ekpo ọkụ, akọrọ na ...
Nkwakọ ngwaahịa & nzipu: Nkwakọ ngwaahịa: Twined na anụ ahụ, juru na katọn. Port of Loading: Xiamen, China Means of Transport: Site ikuku / site n'oké osimiri / DHL / EMS Ebute oge: 7-15 ụbọchị. Mentkwụ :gwọ: Paykwụ :gwọ: T / T, Western Union. Nlekọta anya: Succulents bụ osisi dị ndụ, ịgbara mmiri dị mkpa. Ma iji ya tụnyere ahịhịa na okooko osisi, ọ dịghị mkpa ka mmiri gbaa ya kwa ụbọchị, nke dị mfe ilekọta. Na oge opupu ihe ubi na udu nmiri, wunye ala mgbe ọ kpọrọ nkụ, wukwasi ya nke ọma. Nwere ike ikwe ka ...
Nkwakọ ngwaahịa & nnyefe: Nkwakọ ngwaahịa nkọwa: ụfụfụ igbe / katọn / osisi ikpe Port nke Loading: Xiamen, China Pụtara nke Transport: Site ikuku / site n'oké osimiri ebute oge: 20 ụbọchị mgbe na-anata ego mentkwụ :gwọ: mentkwụ :gwọ: T / T 30% n'ọdịnihu, itule megide mbipụta nke akwụkwọ mbupu. Nlekọta mmezi: Parodia schumanniana nwere mmasị n'ọtụtụ ọkụ, ọ na-achọ ọ dịkarịa ala awa isii nke ìhè anyanwụ kwa ụbọchị. N'oge ọkọchị, ekwesịrị iji ya mee ihe kwesịrị ekwesị, mana ọ bụghị oke oke, ma ọ bụghị ya, ọ ga - abụ ...
Nkọwapụta: 1.Size dị: 3/5 braided (dayameta 2-2.5cm, 2.5-3cm, 3-3.5cm, 3.5-4.0cm) 2. Mgbọrọgwụ ma ọ bụ cocopeat na epupụta dị, dabere na ihe ndị ahịa chọrọ. Nkwakọ ngwaahịa & nnyefe: Nkwakọ ngwaahịa: ngwugwu katọn ma ọ bụ trolley ma ọ bụ nkụkọ osisi na-akwakọba Port nke Loading: Xiamen, ansgbọ njem China: Site na ikuku / site n'oké osimiri Na-ebute oge: mgbọrọgwụ 7-15 ụbọchị, na cocopeat na mgbọrọgwụ (oge ọkọchị 30 ụbọchị, Oge oyi oge 45-60 ụbọchị) Paykwụ Paygwọ: Paykwụ :gwọ: T / T 30% n'ọdịnihu, nhazi ọzọ ...
Single ogwe Pachira Macrocarpa Foliage Bonsai ...
Nkọwapụta: Size dị: 30cm, 45cm, 60cm, 75cm, 100cm, 150cm wdg na elu Nkwakọ ngwaahịa & nzipu: Nkwakọ ngwaahịa: 1. Iferi mbukota na ígwè crates ma ọ bụ osisi mgbe 2. Potted na ígwè crates ma ọ bụ osisi mgbe Port nke Loading: Xiamen , China Means of Transport: Site ikuku / site n'oké osimiri Ebute oge: 7-15 ụbọchị mentkwụ :gwọ: mentkwụ mentgwọ: T / T 30% n'ọdịnihu, itule megide mbipụta nke akwụkwọ mbupu. Nlekọta mmezi: Ìhè: Pachira macrocarpa hụrụ okpomọkụ dị elu, iru mmiri na ìhè anyanwụ, ọ nweghịkwa ike ikpu ...
Nkọwapụta: Size dị: 30-200cm Nkwakọ ngwaahịa na nnyefe: Nkwakọ ngwaahịa: n'okporo osisi ma ọ bụ na ịgba ọtọ Port of Loading: Xiamen, China Means of Transport: Site n'oké osimiri ebute oge: 7-15 ụbọchị mentkwụ :gwọ: Paykwụ :gwọ: T / T 30% na n'ihu, itule megide akwụkwọ nke mbupu akwụkwọ. Omume Uto: Okpomọkụ: Igwe kachasị dị mma maka uto maka bougainvillea bụ 15-20 Celsius, mana ọ nwere ike iguzogide ogo dị elu nke 35 Celsius n'oge ọkọchị ma debe gburugburu ebe na-erughị ogo 5 ...
Ngalaba na-ahụ maka oke ọhịa nke Fujian gosipụtara na mbupụ nke ifuru na osisi ruru US $ 164.833 nde na 2020, mmụba nke 9.9% karịa 2019. Ọ gara nke ọma "tụgharịrị ọgba aghara dị ka ohere" wee nweta uto na-aga n'ihu na nsogbu. Onye lekọtara Fujian Forestry Depa ...
Ọ bụrụ na osisi anaghị agbanwe ite, uto nke usoro mgbọrọgwụ ga-ejedebe, nke ga-emetụta mmepe nke osisi. Tụkwasị na nke ahụ, ala dị n'ime ite ahụ na-arịwanye ụkọ na-edozi ahụ ma na-ebelata ịdị mma n'oge uto nke osisi ahụ. Ya mere, na-agbanwe ite na nri ti ...
Iji mee ka ikuku gas na-emerụ ahụ nke ọma, cholrophytum bụ okooko osisi mbụ nwere ike itolite n'ụlọ ọhụrụ. A maara Chlorophytum dị ka "onye na-eme ka ihe dị ọcha" n'ime ụlọ ahụ, na-enwe ike iji ike formaldehyde. Aloe bu ahihia ahihia nke na eme nma envi ...